Kitra: matoky ilay «comité de normalisation» ny rehetra | NewsMada
Velombolo ny mpankafy taranja baolina kitra fa tafatsangana ihany ilay komitin’ny fanamarinana, «comité de normalisation», hanomana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF).
Samy naneho ny heviny avokoa, na mpilalao, na mpanazatra, na mpijery, na mpanohana, na ireo raiamandreny, na fikambanana, ny amin’ny fitsanganan’ilay komitin’ny fanamarinana, «comité de normalisation», eo amin’ny taranja baolina kitra. Komity hisahana sy hikarakara ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasy (FMF). Raha tsiahivina, olon’ny lalàna ary mahafehy tsara ny fifidianana ny hitarika izany, tsy iza fa ramatoa Attalah Béatrice. Tsy zovina amin’ny rehetra izy fa efa nitantana ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena ny fifidianana, fony andron’ny Tetezamita (Cenit). Noho ny traikefany, manantena sy mino ary matoky ny tontolon’ny baolina kitra fa hizotra tsy hisy tomika ny fanatontosana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona.
Tsy izy irery anefa no hiantsoroka ity adidy mavesatra ity fa eo ihany koa Rabenarivo Sahondra, mpahay lalàna ihany koa. Hanampy azy ireo i Benony Jacques, filohan’ny federasiona tamin’ny fotoan’andro, ary Andriatianarivelo René, tonian’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana an-tampony. Raha zohina izany, olona efa feno fahaiza-manao sy za-draharaha ny hitondra ny baolina kitra, hatramin’ny 12 mey 2019, fotoana hahataperan’ny fiasan’ity komity ity.
Raha ny fantatra, mbola afaka mamerina ny fifidianana tany amin’ireo ligim-paritra hita fa tsy nanaraka ny lalàna izy ireo raha toa ka voamarina izany, araka ny voalazan’ny solontenan’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), tamin’ny mpanao gazety.
Marihina fa miverina hatrany am-boalohany indray ny fametrahana antontan-taratasy ho an’ireo ho kandidà hifaninana amin’ity ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra ity.